वडा अध्यक्षको श्रीमतिलाई नियुक्ती नदिइ हिडे शितगंगाका कार्यकारी – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर वडा अध्यक्षको श्रीमतिलाई नियुक्ती नदिइ हिडे शितगंगाका कार्यकारी
वडा अध्यक्षको श्रीमतिलाई नियुक्ती नदिइ हिडे शितगंगाका कार्यकारी
अर्घाखाची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका वडा नः १३ का वडा अध्यक्षको श्रीमतिको नियुक्तीलाई स्वीकृत नगरी कार्यकारी अधिकृत सरुवा भई हिडेका छन ।
अख्तीयारमा अनुसन्धान भई रहेको र फरक बिषयमा परिक्षा लिइएकोले आफुले स्वीकृत नगरेको कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले बताएका छन ।
कार्यकारी अधिकृतको ५ दिन अगाडी सरुवा भएको छ ।
वडा नः १३ का वडा अध्यक्ष दुर्गा बिसिले आफनी श्रीमतिलाई सुचना लुकाएर जागिर खुवाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय बुटवलले अहिले छानविन गरि रहेको छ ।
सुचना लुकाएर आफनी श्रमितिलाई जागिर खुवाएको वैखरी अनलाइन मिडियाले खुलासा गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले छानबिन थालेको हो ।
वैखरी अनलाइनबाट भदौ १० गते वडा अध्यक्ष र बिद्यालयका प्रअलाई फोन सम्र्पक गरी उनीहरुको प्रतिक्रियासहित समाचार लेख्दा समेत दुवैले हामीलाई नसोेधी एक पक्षिय रुपमा समाचार बनाएको झुटो आरोप लगाएका थिए ।
पत्रकारलाई पत्रकारिताको बिषयमा आधारभुत ज्ञान समेत नभएको बताउने बिद्यालय र गाउटोलमा रिसि अञ्जान नामले चिनिएका बिद्यालयका निमित्त प्रअ रिषि बिकलाई आवेदक मध्ये ३ जना अनिवार्य परीक्षामा हुनुपर्ने अन्यथा पुनः ७ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने शिक्षा सम्बन्धी नियमनै थाहा छैन ।
बिद्यालयले गरेका कर्तुतहरु
कर्तुत नः १ ः शिक्षक नियुतिmका लागी बिज्ञापन लुकाउने जिम्मा वडाअध्यक्षलाई किन ?
शिक्षक नियुतिmका लागी बिद्यालयले निकाल्ने बिज्ञापन लुकाउने जिम्मा बिद्यालयले वडा अध्यक्ष बिसिलाई दिएको पाइएको छ । उनी आफलै अर्घाखाचीको एक एफएममा १५ दिनको बिज्ञापन बजेको बताएतापनि एफएमका सञ्चालकले भने वडा अध्यक्ष बिसिले ७ दिनका लागी बिज्ञापन बजाउन दिएको कुरा बाझिनु ।
कर्तुत नः २ ः सबै आवेदकको निवेदनमा एउटैको लेखाई किन ?
बिद्यालयले वडा अध्यक्षको श्रीमतिलाई जागिर खुवाउन अवै आवेदकको निवेदनमा एउटै लेखाई देखिएको छ । जसबाट प्रष्ट थाहा के हुन्छ भने वडा अध्यक्षको श्रीमतिलाई जागिर खुवाउन बिद्यालयनै हात धोएर लागेको थियो ।
कर्तत नः ३ ः फेसबुकमा बिज्ञप्ती राख्ने बिद्यालयले बिज्ञापनको सुचना किन राखेन ?
बिद्यालयमा भए गरेका सबै गतिविधि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत राख्दै आएको बिद्यालयले शिक्षक नियुतिm सम्बन्धी सुचना भने राखेन । वैखरी अनलाइनबाट यस बिरुद्ध समाचार प्रकाशन भएपछि बिद्यालयले आफुलाई बचाउनका लागी एक पछि एक झुट बोलेको खुलासा भएको छ । समाचार प्रकााशनपछि मात्र बिद्यालयले बिद्यालयको फेसबुकको पेजमा “सुचना टासेको छैन भन्नेका लागी”, “बिज्ञापन नछापेको भन्नेका लागी” भन्दै पोस्ट गरेको पाइएको छ ।
कर्तुत नः ४ ः बिद्यालयले अनुमति नै नलिई भर्ना किन खोल्यो ?
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अर्घाखाँचीले शितगंगा १३ स्थित बुद्ध आधारभूत विद्यालयले नयाँ शिक्षक भर्ना अनुमतिनै नलिएको पाइएको छ । विद्यालयमा रिक्त रहेको अंग्रेजी विषयको शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्नेमा नेपाली विषयको शिक्षक भर्नाको अनुमति माग्न आएपछि आफूले अंग्रेजी विषयकै शिक्षकबाहेक अरु विषयको शिक्षक भर्ना गर्न अनुमति नदिएपछि अवैध तरिकाले भर्ना गरेको जिल्ला शिक्षा समन्वय प्रमुख मनिराम पराजुलीले बताए । “यो भर्ना प्रक्रिया पूर्णरुपमा अवैध छ । जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय ईकाले मान्यता दिदैन” उनले भने ।
कर्तुन ः ५ ः उपस्थित भएकै आधारमा वडा अध्यक्षकी श्रीमतिलाई किन परीक्षामा पास गराइयो ?
े परीक्षामा ३ जना अनुपस्थित भएको भएतापनि वडाध्यक्षकी श्रीमती मात्र उपस्थित भइन् । प्रक्रिया अनुसार आवेदक मध्ये ३ जना अनिवार्य परीक्षामा हुनुपर्ने अन्यथा पुनः ७ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने थियो । तर त्यहीँ दिन नै परीक्षा नदिएर उपस्थित भएकै आधारमा परीक्षा पासगरि शिक्षक नियुक्ति दिइयो ।